Yeroo nagaa waaraan biyya keenya Oromiyaa keessatti uumamuuf socho'amaa jirutti tokkummaa Oromoo });
Yeroo nagaa waaraan biyya keenya Oromiyaa keessatti uumamuuf socho'amaa jirutti tokkummaa Oromoo
Nagaa waaraa biyya keenya Oromiyaa keessatti akka uumamu, gaaffiin Oromoo karaa nagaa akka nuu deebi'u dhiibbaa gochaa turuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo beekamaadha.
Nageenyi biyyattii akka deebii'uuf rakkoo siyyaasaa biyya Xoophiyaa karaa nagaa akka furamuuf waamicha ABO taasise fudhachuun tarkaanfii mootummaan naannoo Oromiyaa taasisaa jiru dinqisiifataa adeemsi karaa nagaa akka milkaa'uuf kan hojjennu ta'uu ibsina.
Qaamoonni maqaa Qeerrootiin miidiyaa hawwaasaa irraan abbootii Gadaa fi qondaalota OPDO yeroo murteessaa kana keessa arrabsan Qeerroo Bilisummaa Oromoo bakka hin bu'an. Qeerroo Bilisummaa Oromoo waan uummatni isaa jaallateef fedhii uumatasaa guutuuf naamusaaf sansaka mataasaan jaarmiyaa socho'u malee jaarmiyaa nageenya biyyattii booreessuuf warraaqu miti!
Qabsoon Oromoo gaaffiin abbaa Biyyummaa hanga mirkaanaa'utti qabsoo roga maraan taasisu itti fufaa waan tokkummaa uummataa jabeessuun qabsoo uummataa gara Bilisummaatiin gahu hojjechuurratti qiyyaafatuu keenya uummataaf ibsaa, yeroo mariin araaraa adeemaa jirutti qaama uummataa kam irratti holola kan hinoofne ta'uu ibsina! Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hagayya 6, 2018 Finfinnee Oromiyaa